Ibhetri ehlala ihlale kwaye ihlala ... | I-Androidsis
Zack | | Ibhetri, Iiselfowuni, Izaziso, Ezinye izixhobo
Ihlala ixesha elingakanani ibhetri ye-Smartphone yakho? Iiyure ezili-12 ... usuku olu-1 ngokungenantsingiselo?
Enye yeengxaki zokuba ne-Smartphone enamandla kunye nokusetyenziswa okuninzi kunye nezixhobo kukusetyenziswa kakhulu kwebhetri. Kungenxa yoko le nto kwiivenkile ezikwi-Intanethi sinokufumana inani elikhulu leebhetri ezizezinye kwi-Smartphone yethu ye-Android. Namhlanje ndiza kuthetha ngebhetri ngeyona ndawo inamandla endiyifumeneyo.
Ngokusebenzisa ivenkile MyLaYesIsi.es singayifumana emangalisayo Ibhetri ye-Galaxy S ayikho enye into kwaye akukho nto ingaphantsi 3000mAh. Ibhetri evela kumzi mveliso kunye neGPS S yi-1500mAh.
Sifumana ibhetri ekumgangatho ophezulu kunye nomgangatho ophezulu. Ingasetyenziswa njengebhetri ebuyisela enye kwaye inokuhlawuliswa ngendlela efanayo nebhetri yefektri.
Ndithelekise ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwemihla ngemihla kunye nebhetri yefektri kunye nale kwaye kufuneka ndivume ukuba ndothukile. Ngebhetri yefektri kwaye uyinike ukusetyenziswa kwesiqhelo: ukuqhagamshela i-3G amaxesha ngamaxesha, kodwa uninzi lwamaxesha, iWifi ayisebenzi, phakathi kwemidlalo kunye ne-intanethi iyure yokusetyenziswa, iifowuni, njl. Kwiiyure ezili-1 ibhetri ikwi-12% okanye i-25%. Nangona kunjalo Ngale 3000mAh ibhetri kwiiyure ezili-12 indityile kuphela i-30% Kwaye oko kubala ukuba ndiyishiye i-3G ngalo lonke ixesha kwaye rhoqo bendimenza ukuba asebenze ukufaka usetyenziso, esebenzisa usetyenziso lwe-Facebook, uGoogle +, uphawu, njl.
Ngokugqibeleleyo le bhetri inokuhlala ukuya kwiintsuku ezimbini okanye ezintathu zokusetyenziswa ngaphandle kokuyihlawulisa ngokusetyenziswa ngokupheleleyo.
Ibhetri iza nesitishi sayo kwi-Smartphone yethu kuba ubungakanani bayo bomzimba buphindwe kabini njengamafutha njengebhetri eqhelekileyo. Ngale bhetri i-Smartphone yethu iya kuba "kukutyeba" kancinci.
Ngaphandle koku, andiboni nakuphi na ukubuyela umva xa kuthelekiswa nobomi bebhetri ebubonisayo. Sikwabona ukuba inexabiso elikhulu, kuphela yi- € 25.60. Ngokuqinisekileyo imveliso Kucetyiswa kakhulu ukusuka kuluhlu lweGalaxy S lwezincedisi.
Qaphela: (Ibhetri ye-Samsung Galaxy S kwaye ivavanyiwe kule Smartphone, nangona ikwakhona kwezinye iimodeli ze-Smartphone).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ibhetri » Ibhetri ehlala ihlale kwaye ihlala ...
Yeyiphi indlela yokuxhasa elona phepha linezidlele! Kwakhona, ukuba iselfowuni bekuye kwimarike ixesha elide ukuyenza iindaba! Ngayiphi na imeko, ukuba bebeneebhetri zeefowuni ezintsha ezinjenge-g.nexus….
Bona inqaku ekupheleni kwenqaku:
Qaphela: "Ibhetri ye-Samsung Galaxy S kwaye ivavanyiwe kuloo Smartphone, nangona ikwafumaneka kwezinye iimodeli ze-Smartphone."
Ngaphezulu, ibhetri iyafumaneka kwi-Nexus S, umahluko omncinci kukuba ngama-2800 mAh.
Kulungile akufani, akunjalo? Iya kuba ngumvelisi ofanayo, okanye uthotho olunye, kodwa ayifani ...
I-naic nje sitsho
Ufuna ntoni? ukubeka amakhulu amabhetri kukushiya wanelisekile? kutheni ungenzi iposti ukuba awuyithandi?
Kum lo mlingane ugqibeleleyo, umnyele s2 sele uza kufika 😀 «Ndiyazi ukuba zininzi kakhulu ezinamandla, kodwa le iya kuba yeyam yokuqala ye-smartphone» kwaye ndinomdla wokongeza i-3200Mah endiyibonileyo apho
Phendula ngokulula uNaic
UmKristu rodriguez barros sitsho
Hayi, ukuba uyeka ukufunda ayifani nokuthi "Ibhetri ye-Samsung Galaxy S kwaye iye yavavanywa kule Smartphone, nangona ikwafumaneka kwezinye iimodeli ze-Smartphone" kune "Ibhetri ye-SGS kwaye kuvavanywe kwi-Smartphone, nangona kukho iibhetri zezinye iimodeli ze-smartphone »
Nangona ibonakala injalo kuwe, ayikufuphi nakuleyo inye, unokuyibuza nje kuba ukuba une-S2 kunye no-S ekhaya kwaye ufuna ukusebenzisa ibhetri enye okanye enye. (Nangona ingcinga ikuxelela hayi ngenxa yekhava ekhethekileyo, kodwa hey)
Kwaye ukongeza phezulu, andazi ukuba ndiyabethemba ubushushu obufunyanwa zezi ntsholongwane xa uzinika intonga encinci, ukuba ibhetri ye-3000mah le iya kunyuka kakhulu, ngakumbi xa uyihlawulisa.
kwinto endiyifundileyo, umyili wentambo unebhetri yolu hlobo, akunjalo? Unokubeka amanye amaqondo obushushu kwi-idle kunye nentlawulo epheleleyo.
Phendula UChristian Rodriguez Barros
Enkosi ngesilumkiso! Ngethamsanqa ulapha ukuza kundilumkisa ngezi zinto zibalulekileyo: P.
Fuck umvavanyi weLizwi, kuhlobo olulandelayo lweOfisi, iMicrosoft izakupela ukujonga iindwendwe ze-Androidsis.
Ndinomdla kwibhetri enobungakanani obuphezulu be-GALAXY s2 yam okwexeshana, kodwa andazi ukuba ndingayithemba kangakanani ibhetri evela kumenzi ongekho semthethweni. Eyona indibetha kakhulu yi-samsung 2000mah esemthethweni kodwa ndiyifumana ibiza kakhulu nge-350mah kuphela ngaphezulu kwesitokhwe esinye. Kuyatshiwo ukuba yi-20% kuphela yebhetri ... kufuneka wenze ntoni?
Ndiyithandile le kwaye ngaphezu kwako konke ndothuswa bubomi bebhetri. Ukuba awukhathali ukuba ifowuni yakho ityebile, ndincoma ukuba uhambe ngephepha kwaye ubone ibhetri ukuze ubone ukuba iyakuqinisekisa na.
Ndithenge le kwiAmazon http://www.amazon.co.uk/Modern-Tech-Capacity-Replacement-3500mAh-Battery/dp/B004T2VL4E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327139597&sr=8-1
I-3500mAh kunye ne-9 yeepawundi kuphela (i-11euros), iza netyala elikhethekileyo kwaye lihamba kakuhle!
Ndifuna enye ye-mb525 yam (motorola defy)
Ifowuni yeShishini. Izixhobo zamatyala e-Blackberry, izindlu, abakhuseli, iitshaja, iibhetri.
Sineentlobo ngeentlobo zezincedisi, iblackberry, iimeko, iitshaja, iibhetri, ii-headphone, iintambo, izandla ezingenasandla, iimeko zeblackberry, izixhobo ze-blackberry.
Yonke into ngexabiso elifanelekileyo. Ukuhambisa ngenqanawa kulo lonke elaseSpain. Iimveliso ezineminyaka emi-2 ISIQINISEKISO. Sinikezela nge-invoyisi. 100% YOKUQALA.
Ndicelile, ukubona ukuba kuhamba kakuhle na
UAndrea Vasquez sitsho
Ngaba ibhetri ye-Samsung Galaxy S iyahambelana ne-Samsung Galaxy S2?
Phendula ku-Andrea Vasquez
Oku kuhamba kakuhle kukuqinisekisa ukuba ihlala ixesha elide kunye ne-bale ye-samsung galaxy ace
Umhlobo obalaseleyo, kodwa awucingi ukuba le nkanunu ifuna itshaja enjalo? kuba kumzi-mveliso kungathatha malunga neeyure ezi-4 ukulayisha okanye ngaphezulu
Ixesha leentaka ezinomsindo kunye noMnyaka weNamba